MADAXWEYNE FARMAAJO IYO RAYSAL WASAARIHII OO KHILAAF SOO KALA DHEX GALAY IYO ARIMAHA AY ISKU HAYAAN | Saxil News Network
MADAXWEYNE FARMAAJO IYO RAYSAL WASAARIHII OO KHILAAF SOO KALA DHEX GALAY IYO ARIMAHA AY ISKU HAYAAN
Hargeysa(saxilnews.com):-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Raysalwasaarihiisa Xasan Cali Khayre, ayaa waxa ka dhexeeya khilaaf siyaasadeed.
Warar xogogaala oo uu Geeska Afrika helay ayaa xaqiijiyay in Madaxweyne Farmaajo iyo Raysalwasaare Khayre ay isku seegeen hawlaha siyaasadeed ee ka jira Muqdisho iyo isbedelo uu Farmaajo doonayay in lagu sameeyo xukuumadda oo uu Khayre ka gaws adaygay.
Guddoomiyihii gobalka Banaadir Mr. Thaabit Cabdi Maxamed ee dhawaan xilka laga qaaday ayaa isna ka mid ah waxyaabaha sii huriyay khilaafka Farmaajo iyo Khayre. Raysalwasaaraha ayaa la sheegay inuu doonayay inaan xilka laga qaadin guddoomiyaha halka uu Maxamed Cabdillaahi Farmaajo goor aan habeena ahayn maalina ahayn si deg
deg ah xilkii uga qaaday, isagoo weliba ku eedeeyay musuqmaasuq.
Wararka qaar ayaa sheegaya in sidoo kale ay Farmaajo iyo Khayre isku seeganyihiin arrimo dhaqaale. Farmaajo ayay wararka qaar sheegayaan inuu aaminsanyahay in raysalwasaarihiisu lugaha kula jiro arrimo musuqmaasuq.
Waxa kale oo la sheegay inay labadan nin ee hadda madaxda ka ah Soomaaliya ay sidoo kale isku seeganyihiin sidii loo maareeyay mawqifkii ay dawladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafaadka ka taagan dalalka gacanka Carabta.
Inkastoo aanu weli khilaafkoodu banaanka u soo bixin, haddana wararka ayaa sheegaya in laga yaabo inuu khilaafkoodu dhawaan banaanka u soo baxo sida looga bartay madaxweynayaashii iyo raysalwasaarayaashii hore ee Soomaaliya. Waxaana khilaafka ka dhexeeya labadan masuul la dareemay markii uu Farmaajo dhawaan u dabaal degay sannad guurada ka soo wareegtay maalintii la doortay oo aanu haba yaraate wax door ah raysalwasaarihiisa ka siinin warbixinihii uu ku soo bandhigayay wax qabadkiisa iyo siyaasadiisa.
Madaxweynayaasha iyo raysalwasaarayaasha Soomaaliya soo mara ayaa caan ku ah in muddo markay wada joogaan uu khilaaf ka dhex oogma, waxaanu khilaafkaasi inta badan ku dhammaadaa in raysalwasaaruhu uu meesha ka baxo. Waxase doorkan la eegayaa haddii ay khilaafkooda xalin waayaan oo uu baarlamaanka soo gaadho, bal midka ay guushu raaci doonto ee ku sii negaan doona kuriga.